Pinta 2.0 GTK 3, .NET 6, सुधारहरू र थपका लागि समर्थनको साथ आउँछ। Ubunlog
Pinta 2.0 GTK 3, .NET 6, सुधारहरू र थपको लागि समर्थनको साथ आइपुग्छ
भर्खर को रिलीज को नयाँ संस्करण पिन्ट १.२ यस नयाँ शाखाको मुख्य नवीनताहरू मध्ये एक यो हो कि विकासकर्ताहरूले GTK3पुस्तकालय र .NET6फ्रेमवर्क प्रयोग गर्न अनुप्रयोगलाई अनुवाद गरेका छन्, केही तत्वहरू र अन्य चीजहरू पुन: डिजाइन गर्नका साथै।
जो जान्दैनन् यो रास्टर ग्राफिक्स सम्पादक, तिनीहरूले Pinta थाहा हुनुपर्छ यो GTK प्रयोग गरेर Paint.NET कार्यक्रमलाई पुनःलेखन गर्न प्रयास गर्नु हो। सम्पादकले ड्राइभ र छवि प्रसंस्करण क्षमताहरूको आधारभूत सेट प्रदान गर्दछ, नौसिखाहरू प्रयोग गर्नेहरूको उद्देश्यका साथ।
सम्भव भएसम्म ईन्टरफेस सरलीकृत छ, सम्पादकले असीमित ब्याकस्पेस बफर समर्थन गर्दछ, बहु तहहरूको साथ काम गर्न समर्थन गर्दछ, बिभिन्न प्रभावहरू लागू गर्न र छविहरू समायोजन गर्न उपकरणहरूको सेटसँग सुसज्जित छ।
यो बाहेक छवि सम्पादन सफ्टवेयरको धेरै विशिष्ट सुविधाहरू छन्ड्राइंग उपकरणहरू, छवि फिल्टरहरू, र र adjust समायोजन उपकरण सहित।
उपयोगितामा फोकस धेरै मा प्रतिबिम्बित हुन्छ कार्यक्रम को मुख्य सुविधाहरु को:
असीमित अनडु इतिहास।
बहु भाषा समर्थन।
उपकरणपट्टीको लचिलो लेआउट, विन्डोजको रूपमा तैरने सहित वा छविको किनारमा डक सहित।
केही साधारण छवि सम्पादन कार्यक्रमहरूको विपरीत, पिन्टाले छवि तहहरूको लागि समर्थन पनि प्रदान गर्दछ।
1 पिन्टा १.2.0 को मुख्य उपन्यास
2 उन्बुन्टु र डेरिवेटिवमा पिन्टा कसरी स्थापना गर्ने?
पिन्टा १.2.0 को मुख्य उपन्यास
कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरिएको यस नयाँ शाखामा सe लाई GTK3पुस्तकालय र .NET6फ्रेमवर्क प्रयोग गर्न अनुवाद गरिएको छ। त्यो बाहेक धेरै विजेटहरूको उपस्थिति अद्यावधिक गरिएको छ र संवाद बाकसहरू, प्रत्येक प्लेटफर्मको नेटिभ संवाद बाकसहरू प्रयोग गरिन्छ, रङहरू छनौट गर्न र फाइलहरूसँग काम गर्ने संवाद बाकसहरू पुन: डिजाइन गरिएको छ। मानक GTK फन्ट चयन विजेट थप पाठ उपकरणमा प्रयोग गरिन्छ।
हामी त्यो पनि फेला पार्न सक्छौं इन्टरफेस प्यालेट संग काम गर्न पुन: डिजाइन गरिएको छ, ब्लक हालसालै प्रयोग गरिएका रङहरूसँग थपिएको छ। प्राथमिक र माध्यमिक प्यालेटहरूको रङहरू अब अनुप्रयोग सेटिङहरूमा बचत गरिएका छन्।
उपकरणपट्टी साँघुरो बनाइएको छ (दुईको सट्टा एउटा स्तम्भ) प्यालेटलाई तल्लो स्थिति पट्टीमा सार्दै।
यसका अतिरिक्त, यो उल्लेख छसम्पादन योग्य छवि सूचीको साथ ई साइडबार हटाइयो र ट्याबहरू द्वारा प्रतिस्थापित गरियो। लेयरहरू र सञ्चालन इतिहास भएका प्यानलहरू मात्र अब स्क्रिनको दायाँ छेउमा छन्।
भर्खरै खोलिएका फाइलहरूको सूचीको साथ मेनु हटाइएको छ, यो कार्यक्षमता अब फाइल संवादमा एकीकृत छ।
GTK3 विषयवस्तुहरू जडान गर्ने क्षमता थपियो।
उच्च DPI प्रदर्शनहरूको लागि सुधारिएको समर्थन।
स्थिति, चयन, स्केल र प्यालेट बारे जानकारीको साथ स्थिति पट्टी थपियो।
उपकरणहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि कन्फिगरेसन रिबुटहरू बीच सुरक्षित छ।
क्लिक गरेर र माउसको साथ ड्र्याग गरेर क्यानभास स्क्रोल गर्ने क्षमता थपियो।
MacOS ले विन्डो भएको मेनुको सट्टा विश्वव्यापी मेनु प्रयोग गर्दछ। macOS र Windows का लागि स्थापनाकर्ताहरूमा सबै आवश्यक निर्भरताहरू निर्मित हुन्छन् (तपाईंले अब GTK र .NET / Mono छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्न आवश्यक छैन)।
स्मार्ट चयन र भरण प्रदर्शन सुधारिएको छ।
अन्तमा, यदि तपाईं यसको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं गएर विवरणहरू परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ निम्न लिंक
उन्बुन्टु र डेरिवेटिवमा पिन्टा कसरी स्थापना गर्ने?
जो मानिसहरु आफ्नो प्रणाली मा यो अनुप्रयोग स्थापना गर्न को लागी इच्छा गर्न को लागी इच्छुक छन्, तिनीहरु निम्न एक रिपोजिटरी थपेर त्यसो गर्न सक्छन्।
हामीले थप्न सक्ने पहिलो भण्डार यो स्थिर रिलीज मध्ये एक हो, जसको साथ हामी पहिले नै यो नयाँ संस्करण पहुँच गर्न सक्छौं।
हामीले रिपोजिटरी थप्न के गर्नुपर्दछ टर्मिनल खुला छ (तपाईले Ctrl + Alt + T कुञ्जी संयोजन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ) र यसमा तपाईले तलका आदेशहरू टाइप गर्नु हुनेछ:
यो भयो अब हामीसँग अनुप्रयोग स्थापना गर्न जानेछौं:
र तयार छ। अब अन्य भण्डारहरू दैनिक संस्करणहरूको लागि एक हो जसमा तिनीहरू मूल रूपमा संस्करणहरू हुन् जुन साना सुधारहरू वा अपडेटहरू प्राप्त गर्दछन्। हामी यसलाई यो साथ जोड्न सक्छौं:
र हामी यससँग अनुप्रयोग स्थापना गर्दछौं:
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » सफ्टवेयर » Pinta 2.0 GTK 3, .NET 6, सुधारहरू र थपको लागि समर्थनको साथ आइपुग्छ
अपेक्षित रूपमा, लिनक्स 5.16-rc8 शान्त हप्तामा आइपुगेको छ र त्यहाँ सात दिनमा स्थिर संस्करण हुनेछ।
UbuntuDDE 21.10 Impish Indri लिनक्स 5.13 र DDE को नवीनतम संस्करणको साथ अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै ढिलो छ।